Saturday July 26, 2008 - 11:03:39 in Maqaallo by Xarunta Dhexe
Waxaan ognahay dhamaanteen oo shaki ku jirin in ay jiraan kumanaan qofood oo soomaaliyeed oo ay si uun kaga maqantahay qayb ka mid ah lixdooda lixaad, kuwii dagaalka ku noqday naafada, kuwa daawooyin qalad ah lagu daldalay iyo kuwa si Rabaani ah u waayay lixdooda lixaad ayeey iskugu jiraan dadka la isku yiraahdu naafadaha ama dadka aysan dhameystirneen lixdooda lixaad.
Kuwa badan oo naga mid ah ayagoo qaba, gacmo, lugo, indhu, dhego, qalbi ayaan hadane waxba laga faaiidin in ay qasaaro bulshada u soo hooyaan maahane. Taasta ay tahay dadkaas Illaah u dhameystiray ama sida aan anaga "Caadiga" u aragnay ka dhigay lixdooda lixaad waa dadka ugu quursiga iyo isla weeyninka badan bulshada oo dhan,
dadka aan anaga u aragno in ay wax ka maqanyihiin caayo, aflagaadeeyo, kadeeda isla markaasna ah jaahiliinta aan yac la dhihi karin, waxna maqlin waxna arkin inkastoo dhego iyo indhu ku yaaliin.
Soomaalida meelkasta oo ay joogaan sida ay u liidaan dadka naafada ah waa mid aad aad u dareemi kartid, mudane in laga xumaado, lana dagaalamo si loo helo bulsha isla siman iyo sharci loo simanyahay oo isku dheelitiraa bulshada soomaaliyeed noockasta ay oo yihiin.
Dadka soomaaliyeed ee maskaxda fekerta leh weey ka seexdeen in ay u doodaan xuquuqda dadka naafada nooca kasta ah ee soomaaliyeed, waxaana laga yaabaa ayagoo ka xun in aysan hadane laheeyn gartidii ay ku hadli lahaayeen oo ay kaga celin lahaayeen dadkaas dadka u awooda sheeganaayo.
Dadka lixdooda lixaad aysan dhameeystirneen ama naafada ah WAXEEY KA MID YIHIIN BULSHADA, WAXEEYNA XAQ U LEEYIHIIN INTA UU XAQ U LEEYAHAY QOFKASTA EE DEGEN WADDANKA AY DEGENYIHIIN!!
Soomaaliya maantay ma lahan dowlad laga sugaa in ay dadka naafada ah guud ahaan masuuliyadooda kaga so baxdo sida dowladaha kale ee dunida sameeyaan, sidaas darteed anaga bulsha ahaan masuuliyad weeyn ayaa naga saaran, waana in aan aqoonsanaa oo damiir iyo dulqaad u yeelaa waxkasta.
Waxaan dood ka jirin maantay oo aan dhamaanteen xariir la yeelanay qof aan wax maqlin, wax arkin, ama gaari lagu riixaa, qof gacan/lug la'a, ama si kale meel jirka/maskaxda ka mid ah naafo kaga ah.
Waana wada ognahay shakiga iyo cabsida weyninka badan ee na gelaaya hadii aan ka aamusno oo aan aflagaadu iyo wax kale midna ku geeysanin qofkaan naafada ah oo aan la kulanay, inkastoo warjeclida dhexdeena ku shidantahay. Maxaayeelay waxaan rabnaa in aan qofkaan barano, ogaano wax ku saabsan, iyo sida uu u noolyahay? Laakiin hadane cabsi, xishood iyo shaki weeynin badan ayaa naga celsha in aan wada hadal la yeelano oo aan tusno qofka dareenkeena dhabta ah.
Balsa nasiib darro badankeena ayagoo raba in ay qariyaan cabsida, shakiga iyo jaahilnimada ka buuxdo maadaama uu la kulmay qof uusan aqoonin si uu ula hadlo, isla markaasna uusan qiyaasi karin sida qofka hadalkiisa u arki doono ayuu caayaa, dagaal iyo inuu qofka niyad jabshu kala hortagaa, asoo moodaa in xaalada murugsan uu asiga/ayada ku jiro oo ah cabsida, shakiga iyo jaahilnimada uu ka qabo dadka uusan qaabkooda jireed/maskaxeed u sameyn sidiisa oo kale kaga baxsan karo.
Waxaan oganahay in maantay qofkii qof cuuryaan ah, ama naafo kale oo la dhashay la caaynaayo maxaa u maleeynee qofka sidaas Illaah u qadaray inuu ahaadu inta uu noolyahay in aan ula dhaqmeyno? Waxaan xasuustaa tusaale aad u foolxuma badan oo aan aniga shaqsi ahaan arkay. Waxaan ahaa ardayad ka mid ah arday aad u tiro badan ee dugsi Quraan wadda aado, waxaana xasuustaa in markii aan ka soo baxno aan la kulmi jirnay badanaa wiil waalidkiis biyo u soo dirsadeen oo aan wax maqlin.
La soco Qamiis Danbe
NB: Qoraalkaan xaquuqdiisa waxaa leh qoraaga ku saxiixan amar la,aana lama daabacan karo, mana la qaadan karo, sidoo kale mala'awaal waa ka mamnuuc ilaa ogolaasho laga helo qoraaga sheekada iska leh. kala xariir: samsam1989@hotmail.com
Ra'iisul Wasaaraha Oo Ku Baaqay In Gurmad Deg Deg Loo Fidiyo Dadka Ay Abaaruhu Saameeyeen
03/03/2017 - 09:47:55